San Htun's Diary: October 2017
ဂျီစီ ခရီးကြမ်း - ၁
၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ မှာ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်း တော်တော်များများ စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းသွားတက်ကြတယ်။ အဲဒီတုန်းက တုပ်တုပ်မှမလှုပ်တဲ့ကိုယ်ဟာ မကြီး စင်္ကာပူရောက်တော့မှ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို မေးမြန်းစုံစမ်းပြီး မကြီးက ကျောင်းတွေလျှောက်ခိုင်းတယ်။ ကိုယ်တို့ ကျောင်းကလူတွေ တက်ကြတာက စင်္ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ် (NUS) မှာဆို Institue of System Science (ISS) က Graduate Dip in System Analysis (GDip SA)၊ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းက Mater of Softwar Engineering ၊ နန့် ယန်းစက်မူတက္ကသို်လ် (NTU) မှာဆို Wee Kim Wee School of Communitcation and Information ကျောင်းက မာစတာတွေ။ Wee Kim Wee School ကျောင်းက မာစတာတွေကို လျှောက်တယ်။ ဒီကျောင်းကို ဘာလို့ တက်ချင်ရတာလဲ၊ ဒီဘာသာရပ်ကို ဘာလို့ ရွေးချယ်တာလဲ၊ ကိုယ့်အကြောင်း၊ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်အကြောင်း အက်ဆေး ၂ ပုဒ် ရေးရတယ်။ နောက်တခုက သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်မှ အီးမေးလ်ပို့ ပြီး ၁ နာရီအတွင်း အက်ဆေးရေးခိုင်းတာ။ အတော်ခက်ပြီး အတင်းကုိုဖျစ်ညှစ် ကြိုးစားပမ်းစား ရေးခဲ့ရတယ်။ ၂၀၀၇ အောက်တိုဘာမှာထင်တယ် MCC ခန်းမထဲ မြန်မာပြည်မှာ နောက်ဆုံးကျင်းပတဲ့ GDipSA ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဝင်ဖြေတယ်။ သင်္ချာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ problem solving skills တွေ မေးတယ် Calculator မသုံးရဘူး။ မကြီး ACCA စာမေးပွဲဖြေရင် MCC ခန်းမဆောင်မှာ ဖြေနေကျဆိုတော့ အဲယားကွန်း အရမ်းအေးတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
ကိုယ့်မှာတော့ MCC ခန်းမဆောင်ထဲမှာ ချွှေးပြိုက်ပြိုက်ကျအောင် ဖြေခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့်အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ်တက်ဖို့၂ နှစ်လောက် စောင့်နေရတဲ့အချိန် လှည်းတန်းက ဆရာကြီးဦးမြကြိုင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျာင်း သွားတက်တယ်။ ဒါကလည်း မကြီး တုိုက်တွန်းလို့ ပါ။ ကိုယ့်ဘာသာဆို ဘာမှလုပ်ဖြစ်မယ်မထင်။ မောင်မောင့်ကိုလည်း သင်တန်းတွေ လိုက်အပ်ပေး တက်ခိုင်းပေမဲ့ တရက်သာသွားတက်ပြီး နောက်သွားမတက်တော့ဘူး။ ကိုယ်က သင်တန်းခပေးပြီး သွားမတက်ရင် နှမြောစရာကြီးဆိုပြီး အပ်တဲ့သင်တန်းတွေကို မပျက်မကွက်တက်တယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေပိတ်ရင် တိုဖယ်ဦးသိန်းဝင်း၊ ဘဝသစ်ဦးအောင်ကျော်၊ မြေနီကုန်းက ဆရာနယ်ဆင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေ တက်တယ်။ အဲဒီလိုတွေ တက်ခဲ့လို့ လည်း နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ ပြင်ဆင်တော့ အင်္ဂလိပ်စာအတွက် ဘယ်အခက်အခဲမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ဖူးဘရိုက်ပညာတော်သင်ဆု ဝင်လျှောက်ပါလားသမီး ဗွီအိုအေရေဒီယိုသတင်းမှာ ကြားလိုက်တယ်လို့အမေကပြောလို့ဝင်လျှောက်တယ်။ တိုဖယ်အမှတ်မရှိတဲ့သူတွေ အမေရိကန်သံရုံးမှာ စာမေးပွဲဝင်ဖြေ အမှတ်မှီရင် ဝင်လျှောက်လို့ ရတယ်ဆိုတော့ ဝင်ဖြေတာ အမှတ်နည်းနည်းလိုသွားတယ်။ NTU မာစတာ ငြင်းပယ်ခံရပြီး NUS က GDipSA ဝင်ခွင့်အတွက် ဖုန်းနဲ့ အင်တာဗျူးတယ်။
တခြားသူငယ်ချင်းတွေကတော့ နည်းပညာမေးခွန်းတွေ အမေးခံရပြီး ကိုယ့်ကျတော့ အလာဘသလာဘ ပြောသလောက်ပဲ။ အစ်မရှိတယ်ဆိုတော့ အကုန်လုံး အစ်မစီစဉ်ပေးမှာပေါ့ ဟုတ်တယ်မလားတဲ့။ ၂၀၀၈ မေလ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ပြီးချိန် ကျောင်းဝင်ခွင့်ရတော့ ကိုယ်က သိပ်မသွားချင်ဘူး။ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ပိုင်ဆိုင်တာတွေ အကုန်ဆုံးရှုံး မိဘတွေတောင် ကံကောင်းလို့ အသက်ရှင်တာဆိုတော့လေ။ အမေက ပိုက်ဆံအတွက် ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ သမီး အမေ ဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်တဲ့။ အဖေက အင်တင်တင် သူက သူ့ သမီးကို ကျူတာဆရာမဖြစ်စေချင်တာကိုး။ ကိုယ့်ကို မာစတာတက်ပြီး ဆရာမလုပ်စေချင်တာ နယ်မှာတာဝန်ကျရင် အမေကချက်ပြုတ်ပေး သူကအလည်လာ သမီးက တက္ကသိုလ်ဆရာမဆိုပြီး ဂုဏ်ယူချင်တာ။ သမီးဖြစ်သူကလည်း ဆရာမလုံးဝမလုပ် မာစတာဝင်ခွင့်ရတော့ ဆရာမ မလုပ်ခိုင်းဘူးဆိုမှ မာစတာတက်မယ်လို့ ပြောတော့ ဆရာမ မလုပ်ခိုင်းပါဘူး မာစတာသာတက်ပါ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကုန်ကုန် ပေးပါ့မယ်တဲ့။ စင်္ကာပူဖက်ကကိစ္စတွေကို မကြီး စီစဉ်နေမှာဆိုတော့ ဘာမှပူစရာမလို အထုပ်ဆွဲသွားရုံ။ ၂၀၀၈ သြဂုတ် ၁ ကျောင်းစတက်တဲ့နေ့ဆရာမမယ်ဂန်က ခုက recession စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက်နေချိန်။ DBS ဘဏ်မှာ အလုပ်သမား ၉၀၀ ဖြုတ်တဲ့အထဲမှာ အများစုက အိုင်တီသမားတွေ။ အရည်အချင်းတွေ ဖြည့်ထားကြ အားလုံးတွန်းတိုက် ကျော်ဖြတ်ရမယ် အရည်အချင်းရှိတဲ့သူသာ ကျန်ရစ်မယ် Survival of the fittest ။ ၁ နှစ် ဒစ်ပလိုမာသင်တန်းပေမဲ့ တကယ်ပင်ပန်းတယ်။
Fall foliage hiking at Bear Mountain, New York State. October 21, 2017, Saturday.
မနက် ၉ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီခွဲ နောက်ဆုံးဘတ်စ်ကား၊ နောက်ဆုံးရထားစီးပြီး အိမ်ပြန်။ အိမ်မှာ အိပ်ရုံပဲအိပ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေလည်း ကျောင်းမှာ ပရောဂျက်တွေလုပ်။ အဲဒီကျောင်းတက်တော့မှ Team work ၊ Presentation ၊ Project Management ၊ Internview ဆိုတာတွေ တကယ်နားလည်တော့တယ်။ ၆ လပြီးတော့ ၆ လ အင်တန်းရှစ်ဆင်း allowence money စရတယ်။ အင်တန်းရှစ်မှာ ဘာတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ပရောဂျက်တင် ၁ နှစ်ပြီးတာနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ရယ်ဒီ။ NUS က ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၂၀ ကျော်ရှိတဲ့တက္ကသိုလ် တကယ်ကောင်းတဲ့ကျောင်း။ NUS ကျောင်းထွက် ဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်အယူဆုံးပဲ။ အင်တန်းရှစ်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာ 711 မှာ အချိန်ပိုင်းလုပ်တယ်။ အမေကမှာတယ် စကားကို ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်ပြောသမီးတဲ့။ မဟုတ်မခံ ဆတ်ဆတ်ကြဲ အားမနာတတ် အမြင်ကတ်ရင် နှပ်တတ်တဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိလို့ဆုံးမရှာတယ်။ 711 မှာ စီနီယာတွေ ပညာပြတာတွေကို အံကြိတ်သည်းခံ မျက်ရည်ကျပေမဲ့လည်း တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တော့ မန်နေဂျာက သဘောကျတယ်။ ကျောင်းသားဗီဇာကုန်တော့ အချိန်ပိုင်းလုပ်ခွင့် မရှိတော့ဘူး။ ကျောင်းပြီးတာနဲ့အလုပ်ရဖို့ရှာဖွေရပြီ။ ဘယ်သူကတော့ ဘယ်မှာအလုပ်ရသွားပြီလို့ ကြားရင် စိတ်တွေပူ ဘယ်တော့များ အလုပ်ရပါ့မလဲ။ ကိုယ်တို့ ကျောင်းက တော်တော်များများ ၁ လခွဲ ၂ လအတွင်း အလုပ်ရကြတယ်။ ကျောင်းသားဗီဇာကုန်သွားပြီး အလုပ်မရသေးရင်လည်း စိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ EPEC long term pass တစ်နှစ်ထပ်လျှောက်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး အလုပ်ရှာလို့ ရတယ်။
ကျောင်းကြွေးတွေရှိတော့ အလုပ်ရမှ ဆပ်နိုင်မှာဆိုတော့ stay အတွက် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားတာ။ ကျောင်းတောင်မပြီးသေးဘူး ပီအာအော်ဖာလက်တာ ရနေပြီ။ အလုပ်ရတာနဲ့Perminant Residence (PR) offer letter ကိုင်ပြီး ပီအာတန်းလျှောက်ရတယ်။ ၂၀၀၇ လောက်အထိ လူတိုင်းနီးပါး ပီအာရတယ် ကိုယ်လျှောက်တဲ့နှစ်မှာတော့ ပီအာတွေ ကြပ်နေပြီ။ ကိုယ်တို့ နှစ်က တော်တော်များများ ပီအာအငြင်းခံရတယ်။ ကိုယ်လည်း ပီအာအငြင်းခံရပြီး Employment Pass EP ရတယ်။ တချို့ တွေကတော့ Work Permit နဲ့တရားဝင်အလုပ်လုပ်။ တချို့ ကျတော့လည်း visit visa နဲ့ လာ တလအတွင်း အလုပ်မရရင် မလေးရှားဖက်ကို ခဏထွက် ပြန်ဝင်ရင် တလထပ်ရ၊ နောက်ထပ် တလထပ်တိုး စုစုပေါင်းရတဲ့ ၃ လအတွင်း အလုပ်ရှာ။ အလုပ်ရရင် ကုမ္ဗဏီက Spass ၊ EP လျှောက်ပေး။ စင်္ကာပူက နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေနဲ့လည်ပတ်ရတဲ့ တိုင်းပြည်ဆိုတော့ stay အတွက် နည်းနည်းလွယ်သလားလို့ ။ အလုပ်ဗီဇာ cancel လုပ်ပြီးရင် တလနေခွင့် ရှိပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ overstay ဖြစ်ရင် ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့ ကြိမ်ဒဏ်ဟာ နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတယ်။ စင်္ကာပူရုံးက အတော်ပျော်ဖို့ ကောင်းတယ် အိုင်တီဋ္ဌာနက အာဆီယံလို့တင်စားရတယ်။ မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် တွေပါတော့လေ။ ကိုယ်တို့lunch group လေးက အတော်ပျော်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ကိုယ်က အစကတည်းက စဉ်းစားပြီးသား စင်္ကာပူမှာ ၃ နှစ်နေမယ် NUS က Master of Softwar Eningeering တက်။ ဒါမှမဟုတ် သြစတြေးလျမှာ မာစတာတက်၊ ဒါမှမဟုတ် သြဇီပီအာလျှောက်ပြီး သြဇီပြောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာ။ မှန်းထားတဲ့ ၃ နှစ်မပြည့်သေးဘဲ ၂ နှစ်ခွဲနဲ့စတိတ်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။
အလုပ်ရှာရင်း အလုပ်ရှာဖွေရေးဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ အမေရိကန်ကျောင်းက အင်တန်းရှစ်ကြေငြာမှာ resume ပစ်တင်မိရာက စလိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ programming test ၃ ပုဒ်မေး B ရတော့ Transcripts တွေပို့Financial Statments တွေပို့မန်နေဂျာက ထောက်ခံစာရေးပေး။ ဖုန်းနဲ့ အင်တာဗျူးဖြေ ကျောင်းသားဗီဇာဝင်ဖို့I20 form ပို့ ပေး အမေရိကန်သံရုံးဝင် ဗီဇာတခါတည်းနဲ့ ရတော့ အစ်မတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေက ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ်က အင်တင်တင်။ ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူး အဝေးကြီးဆိုတော့လေ။ သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်က နင့်မှာ ပိုက်ဆံကိစ္စလည်း မပူရဘူး ထောက်ပံ့မဲ့ အဖေနဲ့ အစ်မရှိတယ်၊ ရည်းစားလည်း မရှိဘူး၊ ငါသာ နင့်နေရာမှာဆို သွားကြည့်လိုက်မယ်။ ကျောင်းပြီးလို့မပျော်တော့လည်း စင်္ကာပူကို ပြန်လာပေါ့ ယူအက်စ်အတွေ့ အကြုံရတာပေါ့တဲ့။ သူပြောတာ မှန်နေတာနဲ့ ပဲ စတိတ်ကို လာခဲ့တာ ၆ နှစ်ရှိပြီ။ စတိတ်မှာ ကျောင်းသားဗီဇာ F1 ၊ အလုပ်ဗီဇာ H1B ၊ ဂရင်းကဒ် GC ရအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရသလဲ၊ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ကြုံရသလဲ၊ ဘာတွေ ဖြစ်လာသလဲဆိုတာတွေကို နောက်အပိုင်းကျမှ ဆက်ပါဦးမယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၇။
Womens 5K Classic
အောက်တိုဘာ ၇ ရက် စနေနေ့ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ် အဲလန်တောင်းမြို့၂၅ နှစ်မြောက် အမျိုးသမီး 5K (၃ မိုင်) အပြေး၊ လမ်းလျှောက်ပွဲ။ 5K ဝင်ပြေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကတည်းက အပြေးလေ့ကျင့်နေတာ တပတ် ၃ ရက်နှုန်းနဲ့၂ လ လေ့ကျင့်ပြီးတာနဲ့5K အတွက် ရယ်ဒီဖြစ်ပေမဲ့ အပြေးမှာမပါတော့ဘဲ လမ်းပဲလျှောက်ဖြစ်တော့တယ်။ မပြေးရလည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲရတာ ပျော်စရာလည်းကောင်း registeration fee ကလည်း ရင်သားကင်ဆာ ရန်ပုံငွေအဖြစ် လှုဒါန်းမှာမို့ကုသိုလ်လည်းရ။ မနက် ၈ နာရီစတယ်ဆိုပေမဲ့ စောနေသေးတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ နေရာမှန်သမျှ ပတ်ပြီးရိုက်။ ပန်းခြံလေးက အတော်သာယာတယ် တောင်ကုန်း၊ စမ်းချောင်း၊ သစ်ပင်တွေ စိမ်းညှို့ ညှို့ နဲ့မြူတွေဝေ့ဆိုင်းနေတယ်။ 5K မစသေးဘူး 2K လောက် လျှောက်ပြီးလို့ခြေထောက်ညောင်းချင်နေပြီ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေပြည့်လာတယ်။ သီချင်းတွေဆို၊ အလှုရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ် စကားပြောခိုင်း၊ ရင်သားကင်ဆာကို အနိုင်ယူနိုင်သူတယောက်က သူ့ အတွေ့ အကြုံတွေကို ပြောပြတယ်။ ကင်ဆာကို ရင်ဆိုင်ပြီး အနိုင်ယူဖို့ ဆိုတာ အတော့်ကိုမလွယ်တဲ့အလုပ်။ စိတ်ရော ခန္ဓာကိုယ်ရော အတော့်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ လိုသလို မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေကလည်း ကူညီဖေးမဖို့ လိုတယ်။
မနှစ်က ပြောပြတဲ့နှစ်ယောက်ဆိုရင် ယောကျာ်းက စွန့် သွားတာတဲ့။ တယောက်က ကောလိပ်ကျောင်းတက်နေတဲ့ သား၊ နောက်တယောက်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ကူညီဖေးမတယ်တဲ့။ ကင်ဆာကို ရင်ဆိုင်အနိုင်ယူနိုင်တာ ၅ နှစ်အောက်၊ ၅ နှစ်အထက်၊ ၁၀ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်အထက်၊ ၂၀ နှစ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်နောက်မှာ ကင်ဆာ Surviors တွေက ချီတက်လမ်းလျှောက်ချိန်မှာ ဘေးမှာရပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက လက်ခုပ်သံတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့အားပေးကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်။ ၂၀၁၂ ကန်တက်ကီပြည်နယ် လူဝီဗီလ်မြို့ မှာ ရင်သားကင်ဆာ လမ်းလျှောက်ပွဲ ရုံးကပါဝင်ဆင်နွှဲတော့ အိမ်ရှင်မိသားစုနဲ့ပါဝင်လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ဘာခံစားချက်မှ ရှိမနေဘူး အပျော်သက်သက် ပါဝင်ဆင်နွှဲတာ။ ခုတော့ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပြီ ထော့နင်းထော့နင်းနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေကိုတွေ့ ရင် အထိုင်အထ အကွေးအဆန့် မှာ ဘယ်လောက်များ နာကျင်နေလိုက်မလဲ။ နာကျင်ကိုက်ခဲ ပင်ပန်းဆင်းရဲလွန်းလို့အသက်ရှင်သန်ရတာ ပင်ပန်းဆင်းရဲလိုက်တာ ခန္ဓာဝန်ဆိုတာ ဒါမျိုးကိုပြောတာ။ ကင်ဆာဆေးတွေက ပြင်းတော့ လူက နုံးချိနေပြီ အစားအသောက်ပျက် ဆံပင်တွေကျွှတ် ကတုန်ကယင် ရင်တွေပူ ဘယ်လိုမှနေလို့ မကောင်း။ ပါဝင်ခ ၄၀ ပေးရပေမဲ့ လက်ဆောင်ရတဲ့ အင်္ကျီနဲ့ တခြားပစ္စည်းတွေက ၄၀ ဖိုးလောက် ပြန်ရတယ်။
ပါဝင်ခငွေ၊ အလှုငွေ အားလုံးကို ရင်သားကင်ဆာ သုတေသနအတွက် လှုဒါန်းမှာမို့တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လှုဒါန်းတာမို့တကယ်သဘောကျတယ်။ ရင်သားကင်ဆာ လမ်းလျှောက်ပွဲမှာ အာရှသားနည်းတယ်။ အဲဒီလိုပွဲမျိုး၊ အားကစားဆိုရင် အာရှသား နည်းတယ်။ အစားအသောက်ပွဲ၊ လျှော့ပင်းဆိုရင်တော့ အာရှသားတွေကြီးပဲ။ အိုင်ကီရာက တနှစ်မှာတရက် စက်တင်ဘာလမှာထင်တယ် Crawfish အနီရောင်ပုဇွန်လုံးရောင်းတယ်။ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ကြိုက်သလောက်စားလို့ ရတယ်။ တရုတ်တွေကြီးပဲ အိုင်ကီရာကဆော့စ်က မကောင်းလို့တရုတ်တွေက ကိုယ့်ဆော့စ်ကိုယ်ယူလာသတဲ့ တရုတ်မယန်း ပြောပြတာ။ အမေရိကန်နိုင်ငံတော် သီချင်းဆိုတဲ့အချိန် အားလုံးကငြိမ်သက်ပြီး တချို့ က ဘယ်ဖက်ရင်ဘတ်ပေါ် လက်တင်ပြီး နိုင်ငံတော်သီချင်းကို တိုးတိုးလေးလို်က်ဆို။ လှောင်အိမ်ကနေ လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတ ချိုးငှက်ကလေးတွေ ကောင်းကင်ကို တဖျပ်ဖျပ် ပျံတက်သွားကြတယ်။ ပြေးတဲ့သူတွေက တလမ်း၊ လမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေက တလမ်း။ လမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းမှာ ၃ မိုင်ကို ၄၅ မိနစ် လမ်းလျှောက်မဲ့သူတွေက ၄၅ မိနစ် ဆိုင်းဘုတ်နောက်မှာစီ၊ ၁ နာရီအောက်၊ ကိုယ်တို့ ကတော့ ၁ နာရီအထက် ဆိုင်းဘုတ်နောက်မှာ စီကြတယ်။ လူတန်းကြီးက အရှည်ကြီး တတောင်ကိုတက် တတောင်ကိုဆင်း။ ဘေးမှာ ဘော်လန်တီယာ လုပ်အားပေးတွေက လက်ခုပ်တီးပြီး အားပေးကြတယ်။ ၁ မိုင်လျှောက်ပြီးတော့ နည်းနည်းမောလာပြီ ရေခွှက်လေးတွေကမ်းတော့ တော်တော်များများ သောက်ကြတယ်။
အမျိုးသမီးတယောက် ချော်လဲကျတယ်နဲ့ တူတယ် ဂေါက်ကွင်းတွေမှာ တွေ့ ရတဲ့ ကားလေးနဲ့ တင်သွားတယ်။ ၁ နာရီ ၈ မိနစ်မှာ ပန်းဝင်ပါတယ်။ ပန်းဝင်ခါနီး Finish Line မှာ ဘော်လန်တီယာ ကျောင်းသားလေးတွေက ဟိုက်ဖိုက်လုပ်၊ လက်တွေမြောက်ပြီး အမိုးမိုးပေး၊ ချီးယားစ်အော်ဟစ်ပြီး ကြိုဆိုကြတယ်။ ငှက်ပျောသီး၊ ရေဘူး၊ ချောက်ကလက်ကိတ်၊ ချောင်ဒါစွတ်ပြုတ်၊ သစ်တော်သီး ဗိုက်တင်းနေအောင် စားရတယ်။ အပြေးမှာ အသက် ၂၀ ကနေ ၃၀ ကြား ပထမရတဲ့သူက ဘယ်သူ မိနစ်ဘယ်လောက်၊ အသက် ၈၆ က မိနစ် ၄၀ နဲ့ ပထမ။ ကိုယ် ၃ မိုင်ကို မိနစ် ၄၀ ပြေးတယ်ဆိုတော့ တရုတ်မယန်းက နင် ပြေးတာမှ ဟုတ်ရဲ့ လား လမ်းများလျှောက်နေတာလားတဲ့။ အင်း ကိုယ် လမ်းလျှောက်နှုန်းနဲ့ပြေးနေတယ် ထင်ပါရဲ့ ။ တရုတ်မယန်း တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဖြေရတုန်းက အားကစားတခုပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ အပြေးပြိုင်ရတယ် ၁၅ မိနစ်အတွင်း ပန်းဝင်မှ အဲ့ဒီတက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်ရတယ်တဲ့။ မိန်းကလေး ၁၅၀ အကုန်လုံး ၁၅ မိနစ်အတွင်း ပန်းဝင်လို့Qualified ဖြစ်ပြီး အကုန်ဝင်ခွင့်ရပါတယ်တဲ့။ ကိုယ်တို့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်တုန်းကတော့ အပြေးမပြိုင်ရဘူး မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးထက် ဝင်ခွင့်အမှတ်ပိုများရတယ်။ ခုတော့ တပတ် ၃ ရက် သွားမပြေးတော့ဘူး တပတ်မှာတခါ သွားပြေးတယ်။ ပြေးရင် ချွှေးတွေထွက် လန်းဆန်းပေါ့ပါးသွားတာကို ကြိုက်တယ်။ 5K မှာ ဆုတံဆိပ်တော့ မရခဲ့ပေမဲ့ အတော်ပျော်ခဲ့တယ်။ နောင်နှစ်တွေမှာလည်း အခွင့်ကြုံခဲ့ရင် ပါဝင်ဆင်နွှဲချင်ပါသေးတယ်။ အခွင့်ကြုံရင် အဲဒီလိုပွဲတွေ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြည့်ပါ တကယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇။
ရေခြားမြေခြား ခရီးသွား - ၄
ဝေါထရိတ်စင်တာမှာ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူနေတဲ့ စစ်သားတွေကိုတွေ့ တော့ အဖေက ဓာတ်ပုံအတူတွဲရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့မေးကြည့်တော့ ရတယ်တဲ့။ မြန်မာပြည်မှာတော့ စစ်သားတွေ မုန်းကြပေမဲ့ စတိတ်မှာတော့ စစ်သားတွေကို လေးစားကြတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် လက်နှစ်ဖက်ကို ခပ်တန်းတန်း ဘေးချထား ဒါမှမဟုတ် ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ပြီး စတိုင်ပေးတတ်တဲ့ အဖေဟာ ဒီနှစ်တော့ လက်နှစ်ချောင်းထောင်၊ ဒေါနယ်ထရန့် စတိုင်ဆိုပြီး လက်မနဲ့ လက်ညှိုးကို ဝိုင်းပြတယ်။ မကြီးငယ်သူငယ်ချင်းအစ်မကြီးက အဲ့ဒါ သူ့ သမီးကြီးနဲ့ စတိုင်တူတာနေမှာလို့ ဖေ့ဘွှတ်မှာ ကွန့် မန့် ပေးတော့ ရယ်လိုက်ရတာ။ လစ်ဘာတီရုပ်ထုဆီ လိုက်ပို့ တော့ ဝိုင်းက ရောက်ဖူးပြီးသားကို ဘာလို့ လိုက်ပို့ တာလဲ ဈေးကြီးပါဘိနဲ့ ။ ရောက်ဖူးပြီးသားဆိုပေမဲ့လည်း နယူးယောက်ရောက်လို့ မှ လစ်ဘာတီကုိုမသွားရင် ရန်ကုန်ရောက်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရား မဖူးသလိုမျိုး ခံစားရလို့ ။ လစ်ဘာတီကျွှန်းကနေ မက်ဟန်တန်စကိုင်းလိုင်းကို ကြည့်နေတုန်း အဖေက သမီးရေ အဲဒီတိုက်အမြင့်ကြီးက ကုလားဆိုင်နားကတိုက်နဲ့ တူတယ်နော်တဲ့။ ဟုတ်တယ် အဲဒါဂျာနယ်စကွဲကတိုက်။ အဖေက အဲ့ဒီလို မှတ်ညဏ်ကာင်းတယ်။ ဝေါထရိတ်စင်တာ၊ အင်ပါရာအဆောက်အဦးတွေကိုတော့ သေသေချာချာ မှတ်မိတယ်။ ပါဝါဘောထီက သန်း၄၀၀ဆု ဖြစ်နေပြီ ကံစမ်းကြမယ်ဆိုပြီး စတိုးဆိုင်ထဲဝင် စက်ကနေ ထီလက်မှတ်ဝယ်တာ အဖေ့ကိုပြတယ်။
အဖေ ဒီအပေါက်ထဲကို ၂ ကျပ်ထည့် ငွေထည့်ရမဲ့ပုံ ပြထားတယ်တွေ့ လား။ အဲဒါတွေက ၁ ကျပ်၊ ၅ ကျပ်၊ ၁၀ တန်၊ ၂၀ တန်တွေပဲ လက်ခံတယ်လို့ရေးထားတာ။ ပိုက်ဆံထည့်ပြီးရင် ထီလက်မှတ်တွေ အများကြီးထဲမှ ၂ ကျပ်တန် ပါဝါဘောထီ၊ ၁ ကျပ်တန် မက်ဂါမီလီယမ်ထီ ခလုတ်ကိုနှိပ်၊ ကျလာတဲ့ ထီလက်မှတ်ကိုသိမ်းထား။ ထီဖွင့်တဲ့နေ့ ကျရင် ဒီဘာကုတ်ရီဒါစက်အောက်မှာ လက်မှတ်ကိုလာဖတ်၊ ကောင်တာကလူတွေကို စစ်ခိုင်းလို့ ရတယ်။ အဖေနဲ့ အမေက အထူးအဆန်း သဘောတွေကျလို့ ။ ထီပေါက်ရင် သမီးအတွက် အိမ်ဝယ်ပေးခဲ့မယ်လို့စိတ်ကူးယဉ်ကြပေမဲ့လည်း ကိုယ်က ဘာဆိုဘာမှ အလကားမရ လွယ်လွယ်ကူကူ သက်သက်သာသာနဲ့ ရမဲ့ကံမပါ။ ဘယ်အရာမဆို ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားအားထုတ် ပင်ပန်းဆင်းရဲခံပြီးမှရမဲ့ ဇာတာပါလာတော့လည်း သန်းဆုကံခေတာပေါ့။ အမေက စတိတ်ကို သိပ်သဘောကျတယ်။ လူသွားလမ်း၊ ပန်းခြံ၊ မသန်းမစွမ်းတွေ အမြင့်ကိုတက်ဖို့တွန်းလမ်း၊ အိမ်သာ၊ အမှိုက်ပုံး၊ နေရာတကာ သန့် သန့် ရှင်းရှင်း စိမ်းစိမ်းစိုစို၊ စနစ်တကျနဲ့လူတွေသွားရလားရ လွယ်ကူအောင် စီစဉ်ပေးထားတယ်။ အသီးအရွက်တွေဆိုရင်လည်း ချိုနေတာပဲ အစိမ်းစားစား၊ ပြုတ်စားကြော်စား အရသာရှိမှရှိ။ မကြီးက အမေ လေဆိပ်မှာ ရေဘူးဝယ်မသောက်နဲ့ဈေးကြီးတယ် ရေဘူးဆောင်သွား။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမဖြတ်ခင် ရေအကုန်သောက် ပြီးရင် အိမ်သာရှေ့ က ရေဖြည့်ကန်မှာရေဖြည့်။
အမေက သမီးတွေပြောရင် အတိအကျလိုက်နာတယ်။ ခရီးသွားတယ်ဆိုရင် အမေက ရေဖြည့်တဲ့တာဝန်ယူတယ်။ အိမ်နားက Red Bull ဘောလုံးကွင်းမှာ ဘောလုံးပွဲသွားကြည့်တော့ ရေဘူးယူခွင့်မပြုဘူး။ တချို့ တွေက ရေဘူးအဖုံးဖွင့်ပြီး အဖုံးကိုလွင့်ပစ်ရင် ဝင်လို့ ရပေမဲ့ ကုိုယ့်ရေဘူးကျတော့ အဖုံးလွှင့်ပစ်တာလည်း လက်မခံဘူး။ အမှိုက်ပုံးထဲ လွှင့်ပစ်လိုက်တော့မှ ဝင်ခွင့်ပြုတယ်။ ရေဘူးကို နှမြောလိုက်တာ ရေဘူးလေးက ချစ်စရာလေး အိုင်ကီရာကဝယ်ထားတာ။ ဘာလို့ ကိုယ့်ရေဘူးကို လက်မခံရတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြတော့ အဖေက ရေဘူးကမာတော့ ကွင်းထဲကိုပစ်မှာ စိုးရိမ်လို့ နဲ့ တူတယ်တဲ့။ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ ရေဆာလာလို့ရေဘူးဝယ်သောက်တာ ၅ ကျပ်တောင် ပေးရတယ်။ ရေဘူးအဖုံးကိုဖွင့်ပြီး သူတို့ ယူထားလိုက်ပြီးမှ ပေးတယ်။ နောက်တခေါက်သွားတော့ နပ်သွားပြီ ရေဘူးခွံပါးပါးလေး ဝယ်သွားတယ်။ ယောက်ျားလိုင်း၊ မိန်းမလိုင်း တန်းစီရတော့ အဖေ့လက်ထဲကရေဘူးကို လက်ညှိုးထိုးပြီး နိုး ... နိုး....တဲ့။ အဖေက ရေဘူးအဖုံးဖွင့်တဲ့ ပုံသဏ္ဍန်လုပ်ပြီး လက်ကိုဖြန့် ပြ သဘောက ရေဘူးအဖုံးကို ဖွင့်ထားတယ်လေဆိုတဲ့သဘော။ အိုကေ...အိုကေ ဆိုပြီး ဝင်ခိုင်းလိုက်သတဲ့ အဖေက ဟိုတပတ်က မသိလို့ ခံရပြီးပြီ ဒီတပတ်တော့ ဘယ်ရမလဲ။ အဖေ ရေဘူးအဖုံးကို လွှင့်ပစ်လိုက်တာလား ဘယ်ကသာ အင်္ကျီအိတ်ထဲထည့်ထားတာ သူတို့ လည်တာလောက်တော့ အပျော့။ ရယ်လိုက်ရတာ အဖေက အဲဒီလိုလူလည်ပါဆို။
ဘောလုံးကွင်းမှာ ပထမပိုင်းပွဲပြီးချိန် အနားပေးတော့ ကိုသက်ထွေးအဖေက အိမ်သာသွားတယ်။ တော့တင်ဟမ်စပါးနဲ့ရိုးမားကို ကွင်းလုံးပြည့် ဒင်းကြမ်းပြည့် အားပေးကြတာ အဖေမှန်းတာ လူ ၄ ထောင်လောက် ဆံ့မယ်ဆိုပဲ။ ဒီလောက်လူများနေပေမဲ့လည်း နေရာမမှတ်မိလို့လမ်းပျောက်နေမှာ စိတ်မပူရဘူး။ သူ့ အမှတ်အသားနဲ့ သူ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်ချလာတာပဲ။ အဖေတို့ ပြန်တော့ လေယာဉ်က ညသန်းခေါင် ရန်ကုန်ကို ဆိုက်ရောက်တယ်။ မောင်မောင်က အဝေးကိုရောက်နေလို့သူ့ သူငယ်ချင်းကို သွားကြိုဖို့အကူအညီတောင်းမလို့ ဟာ ကားရောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ မတောင်းတော့ဘူး။ အဖေက ရတယ် တက္ကစီငှားသွားမယ်ဆိုတော့ မကြီးက စိတ်ပူတယ်။ ညဥ့်နက်သန်းခေါင်ဆိုတော့ လုယက်တာတွေရှိတယ်လို့ကြားတယ်တဲ့။ အဖေ မကြီးက စိတ်ပူနေတာ လုယက်တာတွေ ဖြစ်မှာစိုးလို့ ဆိုတော့ အဖေ ကားနံပါတ်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်။ ဖုန်းပြောသလိုဘာလိုလိုနဲ့မသိမသာလေး ဒရိုင်ဘာမသိအောင် ရိုက်ထားတယ်တဲ့။ အဖေက အဲဒီလို ဖြတ်ထိုးညဏ်ကောင်းတယ်။ မနက်စောစော ဖုန်းမယူဘဲ အမေ လမ်းလျှောက်ထွက်သွားလို့စိတ်ပူလိုက်တာ။ ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်လည်း အလွတ်မရ၊ အိမ်နံပါတ်လည်းမသိဆိုတော့ လမ်းပျောက်နေမှ ဒုက္ခ။ ရဲကို အကူအညီတောင်းဖို့ ၊ ရထားစီးတဲ့အခါ ကိုယ်က ပလက်ဖောင်းမှာကျန်နေ အဖေတို့ က ရထားထဲပါသွားခဲ့ရင် နောက်ဘူတာမှာဆင်း၊ အဲဒီနေရာမှပဲရပ်နေလို့မှာထားတယ်။
အပြင်သွားရင် ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်၊ အိမ်လိပ်စာပါတဲ့စာရွက်လေးကို အမြဲဆောင်ခိုင်းတယ်။ အဖေတို့ပထမအကြိမ်လာတုန်းက သုံးပါးကျောင်းဆရာတော်ကို သွားဖူးတော့ ဆရာတော်က စတိတ်ရောက်ခါစ ဘုန်းကြီးတပါး မနက်လမ်းလျှောက်ထွက်သွားတာ လျှောက်ရင်းလျှောက်ရင်း ကျောင်းကိုရှာမတွေ့လမ်းပျောက်သွားတာ ၂ ရက်လောက်ကြာတယ်။ လမ်းတွေက မန္တလေးလို လေးထောင့်ကွက်တွေနဲ့ဆောက်ထားတယ်လို့ထင်နေတာ။ အပင်တွေကို ရေလောင်းနေတဲ့အမေရိကန်တယောက်က သူ့ မိန်းမယိုးဒယားမကို ယိုးဒယားဘုန်းကြီးတစ်ပါး အိမ်ရှေ့ ရောက်နေတယ်လို့သတင်းပေး။ ယိုးဒယားမကမေးမြန်း မြန်မာသံရုံးကိုဆက်သွယ် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ရောက်လာတော့မှ အဲဒီကိုယ်တော်လည်း မေ့လဲသွားတယ်။ အဲဒီလို ကြားထားတော့ စိတ်ပူတာပေါ့ အမေ အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ရမှပဲ စိတ်အေးသွားတယ်။ သမီး ဒီနားကနေ လေယာဉ်ပျံတွေ ငါးမိနစ်တစင်း တက်လိုက်ဆင်းလိုက်။ ဆယ်မိနစ်လောက်အဝေးမှာ အင်တာနေရှင်နယ်လေဆိပ်ရှိတယ်။ အင်တာနက်ကနေ လေယာဉ်တွေ ဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတာ ပြလိုက်တယ်။ ကားတင် traffic ရှိတာမဟုတ်ဘူး ကောင်းကင်မှာလည်း traffic ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် လေယာဉ်က လေဆိပ်ရောက်နေတာတောင် ချက်ခြင်းမဆင်းရသေးဘူး ၁၅ မိနစ်လောက် ကောင်းကင်မှာဝဲပြီး ဆင်းဖို့ စောင့်နေရတာကိုး။
အဖေတို့ စီးလာတဲ့လေယာဉ် ဘယ်ရောက်နေပြီ ဘယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ သွားတယ်ဆိုတာ အကုန်ကြည့်လို့ ရတယ်။ ဟုတ်လား စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ အဖေတို့ စီးလာတဲ့ လေယာဉ်က တနာရီ ဘယ်နှမိုင်နှုန်း မောင်းလဲသိလား။ အဲဒါတော့ မသိဘူး နယူးယောက်ကနေ လော့အိန်ဂျလစ်ကို မိုင် ၃၀၀၀၊ ၆ နာရီစီးရတာ မှတ်မိလား။ ၂၀၁၅ တုန်းက ကယ်လီဖိုးနီးယားဖက်ကို ၇ ရက် ခရီးထွက်တုန်းကလေ။ မှတ်မိတယ် အဲဒါဆို ၁ နာရီ မိုင် ၅၀၀ နဲ့မောင်းတာပေါ့။ ဘိုးအင်းလေယာဉ်ကတော့ ပိုမြန်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ မကြီးကိုပြောပြတော့ အယ်မလေး သားအဖနှစ်ယောက် ခေါင်းချင်းဆိုင်နေလိုက်ကြတာ အဲဒီဆိုဒ်မှာ ဘယ်လေယာဉ်က ဘယ်လမ်းကြောင်းကနေ ဘယ်နှမိုင်နှုန်းနဲ့ သွားတယ်ဆိုတာ အကုန်ရေးထားတယ်။ အဖေ ဘာတွေနှိပ်လိုက်လဲတော့မသိဘူး အိုင်ပတ်က ဘယ်လိုမှဝင်လို့ မရတော့ဘူး။ ဝေါထရိတ်စင်တာက ပန်းသီးဆိုင်ကိုသွားတော့ ကာစတာမာဆားဗစ်ခေါ်ပါတဲ့။ ကွန်ပျူတာနဲ့အိုင်ပတ်ကို ချိတ်ဆက်၊ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲ remote login နဲ့ ဝင်ပြီး iOS အသစ် ဒေါင်းလုပ်ချ၊ account ဝင်ခိုင်းတာ password မှားနေလို့ဘယ်လိုမှ ဝင်လို့ မရဘူး။ ၁ နာရီကြာတယ် နောက်နေ့ လည်း နာရီဝက်လောက်ကြာအောင် လုပ်ပြီးတော့ စင်္ကာပူကနေဝယ်တာဆိုတော့ စင်္ကာပူကို ပြန်ပို့ ပါတဲ့။
ဒေါနယ်ထရန့်စတိုင်ပါတဲ့
နောက်တော့ မကြီးကို password နောက်တခုမေးပြီး ဝင်တော့ရတယ်။ ပန်းသီးက Security ကောင်းလိုက်ပုံများ။ အဲဒီလို ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်နေရတာကိုမြင်တော့ အမေက အဖေ့ကို ဆူတယ် ကလိဦးလေ ခုတော့ဖြစ်ပြီမလား ကိုယ်လုပ်လို့ ဖြစ်တာဆိုတော့ ငြိမ်နေတယ် သူများလုပ်ရင် ပြောမဆုံးဖြစ်ဦးမယ် အဲဒီလိုပျက်မှာစိုးလို့ဘာမှမလုပ်တာလို့အမေကဆူတော့ အဖေက မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ငြိမ်နေတယ်။ ဆေးကဒ်ကုန်ပြီး ကဒ်အသစ်ဖောက်တာမဟုတ်ဘူး ဟိုအကဒ်မှာနည်းနည်း ဒီအကဒ်မှာနည်းနည်း ဒီမှာကြည့် ငါမှာ တကဒ်ကုန်မှ တကဒ်ဖောက်တာ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် ဒီကဒ်လေး ၂ ကပ် ယူသွားရုံပဲ။ ဘယ်လောက်ပြောပြော ဘယ်တော့မှ နားမထောင်ဘူး စည်းကမ်းမရှိဘူး သူ့ သမီးတွေပြောမှ နားထောင်တယ် သမီးပြော။ အမေ အဖေပြောတာမှန်တယ် အဲ့လိုဖြစ်ရမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ ရှက်ရယ်ရယ်နေလေရဲ့ ။ ဒီတခေါက်တော့ လူအများနဲ့ မျှနေရတာ မဟုတ်တော့ အနေမကြုံ့ ၊ မြို့ လေးကလည်း အေးအေးဆေးဆေး သာသာယာယာ ခြေခင်းလက်ခင်းသာ၊ တပတ် ၂ ခါလောက် ညနေရုံးဆင်းရင် ဝေါထရိတ်စင်တာကိုလာ ပြီးရင် မက်ဟန်တန်တခွင် လျှောက်လည်။ အဖေနဲ့ အမေတော့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ အမှတ်တရတွေ တပွေ့ တပိုက်နဲ့ပြန်သွားကြလေရဲ့ ။
အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၇။
ရေခြားမြေခြား ခရီးသွှား - ၃
၂၀၁၇ ဇွန်လမှာ အဖေတို့စတိတ်ကို လာလည်ကြပါတယ်။ အဖေက ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ အမေက တတိယအကြိမ်ပါ။ အမေရိကန်ဗီဇာကို ကိုယ်က အွန်လိုင်းကနေ လျှောက်ပေးပြီး စာရွှက်စာတမ်းတွေကို မကြီးက စင်္ကာပူကနေ စာအိတ်နဲ့ ထည့်ပေး၊ အင်တာဗျူးမတိုင်ခင် တပတ်အလိုမှာ အဖေက သံရုံးရှေ့ က စာတိုက်ပုံးထဲသွှားထည့်။ ကိုယ့်အလုပ်သစ်၊ ဘယ်မှာလုပ်တယ်၊ ဘာဗီဇာနဲ့နေတယ်ဆိုတာ ပြောပြထား၊ အင်တာဗျူး အတွေ့ အကြုံ ရှိပြီးသား၊ အမေရိကန်မှာ တလလောက်ပဲနေပြီး ပြန်လာမဲ့သူတွေဆိုတာ သေချာနေတော့ ဗီဇာမရမှာကို စိတ်မပူတော့ဘူး။ အင်တာဗျူးအပွိုင့်မန့် ယူတော့ confirmation အီးမေးလ်ရတယ်။ အင်တာဗျူးဝင်ခါနီး အဲဒီ confirmation number မပါလို့မဝင်ရဘူးဆိုလို့ဘိုင်ဘာကနေ လှမ်းပို့ ပေးရသေးတယ်။ ဘာတွေမေးလဲဆိုတော့ စတိတ်ကို ဘယ်နှစ်ခေါက်ရောက်ဖူးလဲ အဖေက ၁ ခေါက် အမေက ၂ ခေါက်၊ ဘယ်သူ့ ဆီ သွှားလည်မှာလဲ သမီးဆီကို၊ ဘယ်မှာနေတာလဲ နယူးဂျာဆီမှာ၊ ဘယ်လုပ်တာလဲ ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာ၊ ဘယ်လောက်နေမှာလဲ တလ။ ဗီဇာငြင်းတယ်ဆိုရင် ပတ်စ်ပို့ စ်ကို တခါတည်း ပြန်ပေးလိုက်ပြီး ဗီဇာရရင်တော့ နောက်နေ့ပတ်စ်ပို့ စ် ပြန်လာထုတ်ရတယ်။ ဗီဇာရပြီးတာနဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ် အလုပ်အသစ်မှာ ၆ လ မပြည့်သေးလုို့ခွှင့်ယူလို့ မရသေးတော့ ကိုယ်က စနေနေ့ မှာပဲ သွှားကြိုနိုင်တယ်။ ဒီတော့ သာကြာနေ့ ညဥ့်နက်သန်းခေါင်မှာထွက်တဲ့ လေယာဉ်ကိုစီး စနေနေ့နေ့ လည်ရောက်မဲ့ဟာကို ဝယ်ပါလို့ မှာတာကို ဘာတွေလောသွှားလဲတော့မသိဘူး မကြီးက ကြသပတေးနေ့ ထွက်မဲ့လေယာဉ်ကို မှားဝယ်လိုက်တယ်။
ရက်က ၂ ရက်ပဲခြားနေတော့ လေယာဉ်လက်မှတ်က ဈေးနည်းနည်းကြီးသွှားတယ်။ သောကြာနေ့ ကို ပြန်ပြောင်းတော့ ဈေးကမလျှော့တော့ဘူး။ လေယာဉ်လက်မှတ်ပေါ်ကနာမည်နဲ့ပတ်စ်ပို့ စ်ပေါ်ကနာမည် တူမတူ တိုက်စစ်ခိုင်းရသေးတယ်။ ဘန်ကောက်ကို ဒုတိယအကြိမ် သွှားတုန်းက အမေ့နာမည်မတူလို့ တဲ့ ငါးသောင်းပေးလိုက်ရဘူးတယ်။ လေဆိပ်တခုကနေတခုအပြောင်းမှာ ဝှီးချဲလ်နဲ့လာကြိုပေးတဲ့ ဝှီးချဲလ်ဆားဗစ်ယူမလားမေးတော့ လူကြုံတွေ ရှိနေတာပဲ နယူးယောက်သွှားမဲ့သူ တယောက်မဟုတ်တယောက်တော့ တွေ့ မှာပါတဲ့။ ရန်ကုန်လေဆိပ်အသစ်က နိုင်ငံခြားကအတိုင်းပဲတဲ့။ ရန်ကုန်ကနေ ဟောင်ကောင်ကို ၃ နာရီစီးပြီးတော့ ဘိုင်ဘာမှာတက်လာသင့်တဲ့အချိန် တက်မလာတော့ စိတ်ပူရပြီ။ အင်တာနေရှင်နယ်ခေါ်တဲ့ကဒ်နဲ့ ခေါ် အတော်ကြီးကြာတော့မှ အဆက်အသွှယ်ရတယ်။ ပထမတခေါက်တုန်းကတော့ နယူးယောက်ကိုသွှားမဲ့ သင်္ဘောသားအစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ကြုံတော့ သမီးရေ နယူးယောက်လူကြုံရှိတယ် စိတ်မပူနဲ့ယူထားတဲ့ဝှီးချဲဆားဗစ်တောင် မလိုတော့ဘူးဆိုပြီး ဝမ်းသာအားရ ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းနဲ့ဘိုင်ဘာကနေ ဆက်သွယ်တယ်။ ခုတခေါက်ကတော့ စိတ်ရှုပ်နေတဲ့အသံနဲ့သမီးရေ နယူးယောက်သွှားမဲ့လူကြုံ တယောက်မှမတွေ့ ဘူး မြန်မာတယောက်ကို ကသေးလေယာဉ်ဂိတ်ပေါက်ပြခဲ့ပေးပါလို့အကူအညီတောင်းတော့ လေယာဉ်ဂိတ်ပေါက်ကို ပြပေးခဲ့တယ် အဲဒီမှာစောင့်နေ ဘုတ်တက်လာလိမ့်မယ်တဲ့။
Arrival day, JFK International Airport
အဖေတို့ ရောက်သွားတဲ့အချိန်က မနက်အစောကြီးဆိုတော့ ဂိတ်တောင်မဖွင့်သေးဘူး။ မုန့် တွေဘာတွေဝယ်စားပြီး ပြန်လာတော့မှ ဂိတ်ဖွင့်တယ်တဲ့။ ဂိတ်ဖွင့်တာနဲ့ဘယ်လေယာဉ်နံပါတ်က ဂိတ်နံပါတ်ဘယ်လောက်ဆိုတာ ဘုတ်မှာပေါ်လာရင်ကိုပဲ အဖေကသိပြီ။ အဖေ့ကို လေယာဉ်လက်မှတ်ပေါ်က လေယာဉ်နံပါတ်၊ ဂိတ်နံပါတ်၊ ခုံနံပါတ်တွေ ကြည့်တတ်အောင် သင်ထားသလို ဘုတ်တွေပေါ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ လေယာဉ်နံပါတ်၊ ဂိတ်နံပါတ်တွေကိုလည်း ကြည့်တတ်အောင် သင်ထားတယ်။ မသိရင်ကောင်တာကိုသွား၊ ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့သူတွေကို လေယာဉ်လက်မှတ်ပြပြီး မေးသာမေး ညွှန်လိမ့်မယ် လိုက်ပို့ ရင် တစ်ဖ်ပေးလိုက်လို့မှာထားတယ်။ အဖေက အလယ်တန်းအထိ တက်ဖူးတော့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ၊ အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိခ်က ဘောလုံးအသင်း၊ ဘောလုံးသမားနာမည်တွေ သိတယ်။ ပြီးတော့ အဖေက လူအရိပ်အခြေ အကဲခတ်တတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မှတ်သားထားတတ်၊ လူရည်လည်တော့ မှားသွားမှာ မစိုးရိမ်ရဘူး။ ညစာစားလာပေမဲ့ ဗိုက်ဆာလို့မုန့် ဝယ်စားကြတယ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ဘဲ ဘယ်လိုများဝယ်စားကြပါလိမ့်။ အဖေက ဆိုင်းဘုတ်ပေါ်က ထမင်းကြော်ပုံကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြတော့ ခေါင်းခါပြတယ် တခြားဆိုင်ကို ညွှန်ပြတယ်။ အဲဒီဆိုင်မှာက ထမင်းမရှိဘူး ကော်ပြန့် လိပ်လိုမျိုးရှိတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မှာတော့ရတယ် ၁၇ ကျပ်တောင်ကျတယ်တဲ့။
ဈေးသက်သာတဲ့ဟာတွေကို ဘယ်ရွေးတတ်ပါ့မလဲ အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ဘဲ စားစရာဝယ်နိုင်တာကိုက အတော်ဟုတ်နေပြီ။ ပြီးတော့လည်း ချက်ချင်းမရသေးဘူး ဘောက်ချာစာရွက်လေးကိုင်ပြီး ကိုယ့်အလှည့်ရောက်အောင် စောင့်နေရသေးတယ်တဲ့။ ရန်ကုန်ကနေ ဖုတ်ပူမီးတိုက် ကသောကမြော ထွက်လာကြတော့ ဗိုက်ဆာနေကြမှာပေါ့။ ဟောင်ကောင်လေဆိပ်မှာ မုန့် ဝယ်စားတဲ့အကြောင်း အဖေက ခဏခဏပြောတယ်။ အဖေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း ရယ်ချင်တယ် သမီးရေ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မုန့် ဝယ်တာကိုတဲ့။ အဖေက အဲ့ဒီလိုဖြတ်ထိုးညဏ်ကောင်းတယ်။ အမေက ဝယ်ပြီးတာတောင် ချက်ချင်းမရသေးဘူး ဘောက်ချာကိုင်ပြီး နံပါတ်နဲ့ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်အောင် စောင့်ရသေးတယ်တော့။ အမေက ဘယ်ဟာမဆိုစားနိုင် ဘယ်နေရာမဆို အိပ်ပျော်တော့ လေယာဉ် ၁၈ နာရီ အကြာကြီး စီးရပေမဲ့လည်း သိပ်မပင်ပန်းဘူး။ အဖေကတော့ စားလည်းမစားနိုင် အိပ်လည်းမအိပ်နိုင် စိတ်ပူတတ်တဲ့သူဆိုတော့ အတော်ပင်ပန်းတယ်။ အဖေဆီမှာ ဗမာလိုတကြောင်း အင်္ဂလိပ်လိုတကြောင်း ရေးထားတဲ့စာရွက်လေးရှိတယ်။ အဲဒီစာရွက်မှာ သမီးဖြစ်သူဆီကို လာလည်တာပါ ၊ တလနေချင်ပါတယ် ၊ကိုယ့်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် အလုပ်အကိုင် ဘာဗီဇာနဲ့ နေတယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ရေတခွှက်လောက် ရနိုင်ပါမလား၊ ခေါက်ဆွဲနဲ့ ကြက်သား၊ ထမင်းနဲ့ ငါး ပေးပါလို့၊ ဖောင်ဖြည့်ပေးပါ၊ ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ပေးပါ ၊ ခေါင်းမူးတယ်၊ အန်ချင်တယ်၊ ဗိုက်အောင့်တယ်ဆိုတာကို ဗမာလိုတကြောင်းး အင်္ဂလိပ်လိုတကြောင်း ရေးထားတယ်။
ဘေးမှာထိုင်တဲ့ အိန္ဒိယသားတစ်ယောက်ကို ဖောင်တွေဖြည့်ဖို့အကူအညီတောင်းတော့ သိပ်မကူညီချင်ဘူး နောက်တော့ စိတ်ပါလက်ပါ ရေးပေးတယ်တဲ့။ သူက ငါးလနေမှာ အဖေက ၃ လနေမှာလို့လက် ၃ ချောင်း ထောင်ပြတယ်တဲ့။ အင်း အင်္ဂလိပ်လိုမပြောဘဲနဲ့လက်ဟန်ခြေဟန် အမူအယာတွေနဲ့ဘယ်လိုများ ပြောကျပါလိမ့်။ အဲဒီအိန္ဒိယသားက ပညာတတ်ပုံရတယ် အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေပဲ ဖတ်တာတဲ့ အဖေက အဲဒီလို အင်္ဂလိပ်စာအုပ်မှန်းလည်း သိတယ်။ လေယာဉ်မယ်တွေက ဘာစားချင်လဲလို့လာမေးရင် အဲဒီစာရွက်လေးပေါ်မှာ လက်ထောက်လိုက် လေယာဉ်မယ်ကဖတ်ပြီး လာချပေး၊ ဘေးမှာထိုင်တဲ့သူကိုလည်း အဲဒီစာရွက်ပြပြီး ဖောင်ဖြည့်ခိုင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝင်တော့လည်း အဲဒီစာရွက်ပေးလိုက်တာ ဘာဆိုဘာမှမမေးဘူး ဒုန်းဆိုဗီဇာထုပေးလိုက်တော့တာပဲတဲ့။ လမ်းတွေပိတ်လို့ဂျွှန်အက်ဖက်ကနေဒီလေဆိပ်ကနေ အိမ်ကို ၂ နာရီလောက်ကြာတယ်။ ရောက်တာနဲ့ အဖေက အိပ်ယာထဲ ထိုးအိပ်တော့တာပဲ။ တရေးနိုးမှ နေ့ လည်စာစား ပြန်အိပ် ည ၁၁ နာရီလောက်နိုးပြီး ပြန်မအိပ်နိုင်တော့ဘူး စကားတွေထိုင်ပြော နေ့ နဲ့ ညနဲ့ မှား ဂျက်လက်ဖြစ်တာ တပတ်လောက်ကြာတယ်။ ရုံးကပြန်လာရင် အိမ်နားကပန်းခြံမှာ လမ်းလျှောက် ၂ ရက်လောက်ဆိုတာနဲ့အဖေက ပန်းခြံကို တယောက်တည်းသွားတတ်နေပြီ ပေါ်တူဂီဆိုင်မှာ ဈေးဝယ်တတ်နေပြီ။ ပန်းခြံဆီသွားတဲ့လမ်းက အိမ်တချို့ မှာ ပေါ်တူဂီအလံ လွှင့်ထားတယ်တဲ့။ အဖေက ဘောလုံးပွဲကြည့်တော့ သူ့ ဘောလုံးသမားတွေရဲ့နိုင်ငံအလံတွေကို သိတယ်။
တပတ်လောက်အကြာမှာ ရုံးဆင်းချိန် ဝါထရိတ်စင်တာကို လာခိုင်းလိုက်တယ်။ ရထားက တလိုင်းတည်း၊ ကိုယ်မနက်တိုင်းတက်သွားတဲ့အခြမ်းက ရထားကိုစီး ဂိတ်ဆုံးရောက်ရင်ဆင်း ဂိတ်ပေါက်နားမှာ စောင့်နေပါလို့ မှာတော့ အဖေက စိတ်နည်းနည်းပူတယ် ဖြစ်ပါ့မလားသမီးရဲ့ ။ ဖြစ်ပါတယ် အဖေလာတတ်ပါတယ် ရှင်းရှင်းလေးကို မှားစရာမရှိဘူး။ ညနေ ၅ နာရီတောင် မထိုးသေးဘူး သမီးရေ ရောက်နေပြီ အောင်မလေး လူကများလိုက်တာ မိန်းမရေ အနားမှာနေ တော်ကြာပျောက်သွားမှဒုက္ခ သမီး အဖေတို့စီအိုအက်စ်ဆိုင်ရှေ့ မှာ ဘယ်မှမသွားဘူး။ ဆိုင်ရှေ့ မှာစောင့်နေတဲ့ အဖေတို့ ကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်တွေ့ တယ်။ အဖေက ရထားပေါ်မှာ ဘေးကလူတွေကို မေးတယ်တဲ့ ဝေါထရိတ်စင်တာလို့ မေးတော့ ခေါင်းညိတ်ပြတယ်တဲ့။ ဒီလိုနဲ့တပတ်မှာ ၂ ရက်လောက် ညနေရုံးဆင်းချိန်မှာ အဖေတို့ က လာစောင့်နေပြီး မက်ဟန်တန်တခွင် လျှောက်လည်ကြတယ်။ အဖေက သင်ယူလိုစိတ်ရှိတယ် ဘိုင်ဘာ၊ ဖေ့ဘွတ်မှာ ဓာတ်ပုံတွေတင်တာ၊ စာရိုက်တာတွေ သင်တယ်။ တီဗွီ၊ အိုင်ပတ်ကနေ ဘောလုံးပွဲတွေကြည့်တယ်။ အမေက အိုင်ပတ်ကနေ သတင်းတွေကြည့်တယ်။ အမေက ချက်ပြုတ်၊ အဖေက အိမ်ရှင်းလင်း၊ ပန်းကန်ဆေး၊ အမှိုက်ပစ်၊ ထမင်းမစားခင် ပန်းသီးရှလကာရည်၊ ဆနွှင်းနဲ့cod liver oil ဖျော်။ အမေက လက်နဲ့ လျှော်ရတာကြိုက်တယ်။ လေးတဲ့ဟာတွေကိုတော့ စက်နဲ့ လျှော်ခိုင်းတယ် အဝတ်လျှောက်စက်ကို ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာ ပြထားတယ်။ တနေ့ တော့ အဖေက ဘိုင်ဘာကနေ ဗွီဒီယိုကောခ်ါပြီး အဝတ်လျှော်စက် မလည်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ မေးတယ်။
United Nations, NYC
သုံးခါတိတိ ဗွီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတဲ့အခါ အဝတ်လျှော်တာ အောင်မြင်သွားတယ်။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ နှစ်ယောက်အိပ်မွေ့ ယာနဲ့ အိပ်တော့ အမေက လှုပ်လို့အဖေက အိပ်မပျော်ဘူးတဲ့။ အဖေက အအိပ်ဆတ်တယ် ကြွက်ပြေးသွားရင်တောင် နိုးတယ်။ တီဗွီမှာ ပေါ်နေတဲ့ နာရီအချိန်မီးက လင်းလို့ တဲ့ စာရွက်လေးနဲ့ ကွယ်ပြီး အိပ်တယ်။ တယောက်အိပ်မွေ့ ယာပြောင်း၊ ဆားခါးခေါင်းအုံးလုပ်ပေး၊ နေ့ နဲ့ ညမမှားတော့လို့ လားမသိ အဖေက အိပ်ပျော်တယ်တဲ့။ မနက်တိုင်း၊ ညနေတိုင်း လမ်းလျှောက်၊ မက်ဟန်တန်မှာလည်းလျှောက် နယူးယောက်က လမ်းလျှောက်ရတဲ့နေရာမှာ နံပါတ်တစ်။ ဘရွှက်ကလင်းတံတားကိုတော့ အဖေက အံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ နှစ် ၁၀၀ ကျော်ပြီ ကျောက်သားတွေနဲ့အသေအချာ အခိုင်အခံ့ဆောက်ထားတယ်တဲ့။ ပန်းခြံမှာ ကောင်လေးတစ်ယောက် ရီမုတ်ကိုင်နေတော့ အမေက လေယာဉ်ပျံသေးဆော့တယ် ထင်နေတာ အဖေက ဒရုန်းတဲ့။ အဖေ ဒရုန်းဘယ်လိုသိလဲမေးတော့ ဘောလုံးပွဲတွေဆို ဒရုန်းနဲ့ ရိုက်တာတဲ့။ အဖေက ဒရုန်းကို စိတ်ဝင်စားနေတာ ဈေးဘယ်လောက်ရှိသလဲတဲ့ ကိုယ်လည်းမသိ။ ဝေါထရိတ်စင်တာက ပန်းသီးဆိုင်မှာ ကိုယ့်ကိုစောင့်နေတုန်း အဖေက show counter မှာ ရစ်သီရစ်သီလုပ်နေလို့အဖေ ဘာတွေကြည့်နေတာလဲမေးလိုက်တော့ သမီးရေ အဲဒါဒရုန်း။
ဒရုန်းကိုကိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းကြည့်မလို့ ပြင်တဲ့အချိန် အရောင်းစာရေးမလေးက ဒေါ်လာတစ်ထောင်တဲ့။ သူ့ မှာ အဲ့ဒီဒရုန်းရှိလို့သိတယ်တဲ့ အဝေး ၃ မိုင်၊ အမြင့် မီတာ ၅၀၀ လောက်၊ ဘထ္ထရီကုန်လို့ဘထ္ထရီအပိုဝယ်သင့်တဲ့အကြောင်း၊ အင်တာနက်သုံး၊ ရီမုတ်ကနေ ဒရုန်းရဲ့ ကင်မရာကို လှည့်နိုင်တဲ့အကြောင်း သိရတယ်။ ကနေဒါမှာနေတဲ့ ကိုယ့်ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းက သူ့ မိဘတွေကို ကနေဒါကိုအလည်ခေါ်ချင်လို့ကိုယ့်မိဘတွေ လူကြုံနဲ့ လာတာလား ဘယ်လိုလာတယ်ဆိုတာ သိချင်လို့ မေးတယ်။ ကိုယ့်မိဘတွေက စာရွက်လေးတရွက်ကိုင်ပြီး စတိတ်ကိုလာတယ်လို့ ပြောတော့ သူ့ မိဘတွေကတော့ အဲဒီလိုလာဖို့ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး သူသွားမှာပဲ ခေါ်လာခဲ့တော့မယ်တဲ့။ သစ်ရွက်တွေအရောင်ပြောင်းချိန်ဆို အရမ်းလှတာ အဖေတို့ ကို ခေါ်ပြချင်တယ် နှင်းကိုလည်းမြင်ဘူးအောင် ဆောင်းတွင်းခေါ်ဦးမယ်။ အယ်မလေး ... အေးလုို့ နေနိုင်ပါ့မလား သမီးရဲ့ခုတောင်ချမ်းလို့စောင်ခြုံနေရတာ။ အပူပေးစက်နဲ့ နေ တကိုယ်လုံး ကောက်ညှင်းထုပ်လို ဝတ်ထားရင်ရပါတယ်။ နှင်းတွေက အမြဲကျနေတာလားသမီး ဒီမြက်ခင်းမှာ နှင်းတွေရှိနေမှာပေါ့နဲ့မလာချင်ဘူးပြောနေပေမဲ့လည်း ဆောင်းရာသီ နှင်းကျတာကို စိတ်ကူးနဲ့ မြင်ယောင်နေကြလေရဲ့ ။ နွှေဦးရာသီ ချယ်ရီပွဲတော်ချိန်တော့ လာချင်တယ် ၂ ပတ်လောက်။ ဟင် ... ၂ ပတ် ဂျက်လက်က ၁ ပတ်လောက် ဖြစ်တဲ့ဟာကို။ ၃ လလောက်နေမယ်ပြောပြီး ၁ လဆိုတာနဲ့ပြန်မယ်ဖြစ်ပါလေရော။ အဖေ ဝှီးချဲလ်ဆားဗစ်၊ လူကြုံရှာဦးမလား အယ်မလေး သမီးရယ် အလာတုန်းကတောင် ဝှီးချဲလ်ဆားဗစ်မယူဘဲ ကိုယ့်ဘာသာ လာခဲ့တာ အပြန်ကျမှ ဝှီးချဲလ်ဆားဗစ်ယူမယ်ဆိုတော့ သိက္ခာကျပါတယ်။ ကိုယ့်အဖေနဲ့ အမေကတော့ အဲ့ဒီလို စာရွက်လေးတစ်ရွှက်ကိုင်ပြီး စတိတ်ကိုလာခဲ့ကာ စာရွှက်လေးတစ်ရွှက်ကိုင်ပြီး စတိတ်ကနေ ပြန်သွားကြလေရဲ့ ။
အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၇။
ရေခြားမြေခြား ခရီးသွား - ၂
Departure day, JFK Airport